Sendikàn’ny Jirama (SEMM) : Manohitra ny fandroahana mpiasa -
AccueilSosialySendikàn’ny Jirama (SEMM) : Manohitra ny fandroahana mpiasa
28/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Nanao fanambarana ny teo anivon’ny sendikàn’ny mpiasan’ny Jirama na ny SEMM, omaly, manoloana ny zava-mitranga eo anivon’ny orinasa nasionaly mpamokatra herinaratra. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy azo ekena ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny eo anivon’ny orinasa Jirama. Voalaza mantsy fa maro ireo mpiasa no mizaka ny fandroahana teo anivon’ny Jirama nanomboka ny taona 2017 noho mankaty. Araka izany, hoy hatrany ny filohan’ny SEMM, Christor Andriamihaja, tsy maintsy mijoro amin’ny foto-kevitra ijoroany ny SEMM amin’ny fiarovana ny zon’ny mpiasa sy ny tombontsoan’izy ireo, ary indrindra ny fiarovana ny orinasa Jirama sy ny fanajana ny fifanarahana iombonana.
Ankoatra izay, nilaza ihany koa izy ireo fa tokony mijery vahaolana amin’ny fivarotan’ny orinasa Jirama ny herinaratra amin’ny fatiantoka ireo tompon’andraikitra isan-tokony manomboka any amin’ny Fanjakana boibe izay, ka hatrany amin’ireo rantsa-mangaika. Nambaran’izy ireo mantsy fa ny fivarotana amin’ny fatiantoka no tsy maha tafarina ny orinasa Jirama, ka mahatonga ny fiankinan-doha amin’ny Fanjakana.
Anisan’ny nisongadina tamin’ny fanambarana nataon’ny SEMM ihany koa ny tsy fankatoavana ny famarotana ny orinasa Jirama amina orinasa tsy miankina. “Tsy azo ekena velively ny fikasana na/sy famarotana ny orinasa amin’ny tsy miankina. Io no mba hany orinasam-panjakana sisa tavela dia mbola hovarotana ihany ve? Efa tsy rariny intsony kosa izany ka noho izany, mijoro izahay sendikà hanohitra izany”, hoy ny SEMM.
Voalaza fa manoloana ny toe-java-misy lalovan’ny firenena amin’izao fotoana izao no antony nanosika ny sendikà hijoro hanohitra ny tsy rariny atao amin’ny mpiasa sy ny orinasa amin’izao fotoana izao.